फोन चार्ज नभएर हैरान हुनुहुन्छ, यस्ता छन् छिटो चार्ज गर्ने उपाय – Sanchar Patrika
काठमाडौं – कुनै समय टेलिफोनमा कुराकानी गर्न घण्टौँ हिड्नुपर्ने नेपालीका घरघरमा अहिले मोबाइल फोन छ ।घरको एउटा कुनै सदस्यलाई फोन गरेर कसैलाई दिनोस् न भन्दा उसकै मोबाइल फोन गर्दा हुन्छ नि भन्ने अवस्था सृजना भएको छ । अर्थात प्रत्येक घरका हरेकजसो सदस्यको हातहातमा मोबाइल छ ।
तर मोबाइल फोन छिटो चार्ज नहुदा दिक्क लाग्नेहरु पनि धेरै नै छन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि आजकल स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीहरूले उनीहरूको मिडरेन्ज र त्यस माथिको श्रेणीका स्मार्टफोनमा फास्ट चार्ज सुविधा प्रदान गरिरहेका छन्।तर यस्ता धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन् जससँग फास्ट चार्ज स्मार्टफोनहरू छैनन् र उनीहरूको फोनहरू ढिलो चार्ज हुने गरेको छ ।
Prevओलीको अयोध्या तीरले मोदीको राजनीति ह’ल्लियो !
Nextआज २०७७ साउन ३ गते शनिबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-